गौदामचौरको गणेश मन्दिरमा दलित पुजारी, टीका लगाउन गए डा. गोविन्द केसी (भिडिओ) :: Setopati
गौदामचौरको गणेश मन्दिरमा दलित पुजारी, टीका लगाउन गए डा. गोविन्द केसी (भिडिओ)
सबिना श्रेष्ठ ललितपुर, साउन २४
दलित समुदायका पुजारी लक्ष्मण रम्तेलको हातबाट टीका लगाउँदै डाक्टर गोविन्द केसी। तस्बिर: सबिना श्रेष्ठ/सेतोपाटी
लक्ष्मण रम्तेलले जातीय छुवाछुतका थुप्रै नमीठा अनुभव संगालेका छन्। एकचोटि दारी काट्न जाँदा आफ्नै साथीले 'दलित र बाहुन-क्षत्रीले एउटै ठाउँमा दारी काट्न हुँदैन' भनेको सम्झँदा आज पनि उनको मन भारी हुन्छ। त्यस दिन उनी घर फर्केर कोठामा एक्लै रोएका थिए।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका-१, गोदामचौरका उनै रम्तेल अहिले स्थानीय गणेश मन्दिरमा पुजारी भएका छन्। पण्डित दिनबन्धु पोखरेलले गत साउन २ गते उनलाई मन्दिरको पुजारी घोषणा गरेका हुन्।
‘मैले भगवानप्रति देखाएको आस्थाकै कारण पुजारी छनौट गरिएको होला,' रम्तेलले सेतोपाटीसँग भने, 'आज दलित समुदायबाटै मन्दिरको पुजारी बन्न पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु। यो जातीय विभेदविरूद्ध ठूलो फड्को हो भन्ने लाग्छ।'
आइतबार रम्तेलको हातबाट टीका थाप्न डाक्टर गोविन्द केसी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, सुजना महर्जन, प्रकृति भट्टराई लगायतको टोली गोदामचौरको गणेश मन्दिर पुगेको थियो। हामी पनि सँगै थियौं।
त्यहाँ मन्दिरको संरचना भन्नु तीनवटा सल्लाको रूखको बीचमा ढुंगाका मूर्तिहरू मात्र रहेछन्। त्यो देखेर डाक्टर केसीले भनेका थिए, ‘हामी त यहाँ मन्दिर बनिसक्यो अनि तपाईं पुजारी नियुक्त हुनुभयो भन्ठानेर आएको!’
जवाफमा रम्तेलले भने, ‘२०७२ सालको भुइँचालोभन्दा अगाडि यहाँ मन्दिर नै थियो। भुइँचालोमा भत्किएदेखि पुनर्निर्माण गरिएको छैन। अब बनाउने कुरा भइरहेको छ।'
यसबीच मन्दिर निर्माणको प्रयास भए पनि विभिन्न कारणवश काम हुन नसकेको उनले बताए। मन्दिर निर्माणको निम्ति गुठीले चन्दा संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
हाउस वायरिङको काम गर्ने ४० वर्षीय लक्ष्मणको घर मन्दिरभन्दा करिब सय मिटर तल पर्छ। उनी आफ्ना बुवा, श्रीमती र छोराछोरीसँग बस्दै आएका छन्। उनकाे जन्म नै यही ठाउँमा भएको हो।
सानैदेखि देख्दै आएको मन्दिर भुइँचालोपछि लथालिंग भएपछि लक्ष्मणसहित केही स्थानीयले पुनर्निर्माणको पहल गरेका थिए। त्यही क्रममा पण्डित दिनबन्धु पोखरेलले साउन २ गते उनलाई पुजारी घोषणा गरेका हुन्।
रम्तेललाई पुजारी बनाउँदै पोखरेलले भनेका थिए, ‘मानिस भनेको सबै एउटै जात हो। यही कुरा समाजलाई बुझाउन दलितको छोरालाई पुजारी बनाएको हुँ। पछिल्लो समय नेपालमा जात र धर्मबीच द्वन्द्व फैलाउन खोजिएको छ। यसप्रति हामी सबै सजग हुनुपर्छ।’
यो मन्दिरमा यसअघि कोही पुजारी थिएनन्। रम्तेल नै यहाँका पहिलो पुजारी हुन्। दलित समुदायको भए पनि आफूले पूजा गर्न थालेपछि गैरदलितहरू पनि आउलान् भन्ने उनलाई विश्वास छ। डाक्टर गोविन्द केसी आफ्नो हातबाट टीका थाप्न आएपछि यो विश्वास अझै बढेको उनी बताउँछन्।
'आज मेरो जिन्दगीकै सबभन्दा खुसीको दिन हो,' उनले भने।
रम्तेलको हातबाट टीका र प्रसाद ग्रहण गरेपछि डाक्टर केसीले यसलाई परिवर्तनको कोशेढुंगा बताएका छन्।
‘यो एकदमै सकारात्मक पहल हो। यसलाई हामी सबैले हौसला दिनुपर्छ। हाम्रो समाजमा शताब्दीऔंदेखि छुवाछुत छ। समाजमा छुवाछुत रहेसम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन। समाजमा भएका सबै मानिसलाई सम्मान गर्न सके मात्र देश अगाडि बढ्छ,’ डाक्टर केसीले भने।
उनले अगाडि भने, ‘परिवर्तनको यो कोशेढुंगालाई यहाँ मात्र होइन, अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ।’
डाक्टर केसीपछि कार्यक्रममा उपस्थित सबैले पालैपालो रम्तेलको हातबाट टीका लगाएका थिए।
रम्तेलले आफू पुजारी पृष्ठभूमिको नभएकाले नित्यपूजा र अन्य विशेष पूजा सञ्चालन गर्न कर्मकाण्डहरू विस्तारै सिक्दै जाने बताए। आफूले कर्मकाण्ड सिकुन्जेलमा मन्दिरको नक्सा तयार भएर पुनर्निर्माण सुरू हुनेमा उनी आशावादी छन्।
हिँड्ने बेला डाक्टर केसीले उनलाई भने, ‘योपटक आउँदा मन्दिरको अवशेष मात्र बाँकी रहेछ। तपाईंहरुले चाँडै मन्दिर निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।'
तस्बिर र भिडिओ: सबिना श्रेष्ठ/सेतोपाटी
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २४, २०७८, २१:५१:००